Igbo, John: Lesson 109 - Nhọrọ n'etiti Jizos na Barabas (Jọn 18:39-40) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 109 (The choice; The flogging of Jesus; Pilate awed by Christ)
b) Nhọrọ n'etiti Jizos na Barabas (Jọn 18:39-40)
39 Ma unu nwere omenala, ka m'rapuru unu otù onye n'ememe ngabiga. Ya mere, ùnu nāchọ ka M'rapuru unu Eze ndi-Juu? 40 Ha we tie nkpu ọzọ, si, Ọ bughi nwoke a, kama ọ bu Barabas. Ma Barabas bu onye nāpunara madu ihe.
Pailat kwenyesiri ike na Jizọs bụ onye eziokwu ma ghara inwe nsogbu. Ọ gakwuru ndị Juu na-echere n'ụlọikpe, ma gbaa àmà n'ihu ọha na onye ebubo amaghị. Oziọma anọ nile na-ekwenye na Jizọs enweghị mmehie ọbụla dịka iwu okpukpe na ụkpụrụ iwu obodo si dị. Ọ pụghị ịbụ onye gọvanọ na-ata ụta maka Jizọs. Ya mere, onye ọrụ nke ndị isi obodo kwetara na Jizọs adịghị ọcha.
Pailat chọrọ iwepụ onwe ya na onye a na-amaghị ama, mana ọ na-echekwa ime ihe na-atọ ndị Juu ụtọ. Ọ na-atụ aro ịtọhapụ onye mkpọrọ ahụ na-adabere na omenala nke mere ka otu onye n'ime ndị ahụ mara ikpe gbaghara na Ememe ahụ. Ọ gbalịrị ịkatọ onye isi nchụàjà site n'ịkpọ Jizọs Eze ndị Juu na-akwa emo. Ọ bụrụ na Paịlet tọhapụrụ ya, Jizọs ga-ahapụ arịrịọ ọ na-adọrọ mmasị (ya mere Paịlet rụrụ ụka), ebe ọ bụ na ọ pụghị ịtọhapụ ndị ya na yok Rom.
Otú ọ dị, ndị nchụàjà na ndị mmadụ were iwe na aha bụ "Eze ndị Juu." Ha na-atụ anya ka dike agha, otu nwoke na-achịkwa ma dị njọ. Ha we rọputara Barabas; na-ahọrọ mmadụ nke mmehie nye Onye Nsọ Chineke.
Ọ bụghị nanị na Kansụl na-emegide Jisọs, mana ọ bụkwa ndị mmadụ na-akwa ya emo. Ị na-eguzo n'akụkụ eziokwu, dị umeala n'obi ma bụrụ onye a na-ejighị n'aka, ma ọ bụ na ị dị ka onye na-edebanye aha na-adabere na ime ihe ike na aghụghọ, na-ahapụ ebere na eziokwu?
c) Ịpịa Jizọs ihe n'ihu ndị na-ebo ya ebubo (Jọn 19:1-5)
1 Ya mere Pailat were Jisus, pia Ya ihe. 2 Ndi-agha we b͕a okpu-eze, kpokwasi ya n'isi-ya, b͕okwasi ya uwe ododo. Ha we nāsi, “Ekele, Eze ndi-Ju!” Ha we jide ya.
Ọ bụ ihe dị mkpa na Paịlet mere ka Jizọs nwere onwe ya ma jide ndị na-ebo ya ebubo. Nke a agaghị eme, kama ọ gbaghaara eziokwu ahụ ma chọpụta nkwenye; n'ihi ya, o nyere iwu ka a pịa Jizọs ihe. Ụgwọ ntaramahụhụ dị otú a bụ ihe na-emenye egwu ma na-agwụ ike. Akara na-ebu ọkpụkpụ na ọkpụkpụ na-aba n'ime akpụkpọ ahụ. Mgbe ndị agha ahụ na-atụgharị Jizọs aka, ha kegidere ya n'ogidi ma jirighachi mmiri ozuzo zoo ya. Akpụkpọ ahụ ya na anụ ya adọwara adọwa nke mere ka enweghi mgbu. Ọtụtụ ndị a tara ahụhụ nwụrụ n'oge ahụ. Onye aka ayi n'emeghi ihe ojo meriri ahuhu na aru.
Mgbe ahụ, ndị agha ahụ, ka ha nọgide na-akwa emo, were ozu ahụ a na-agba ara. Ndị agha a na-atụ egwu ndị na-eyi ọha egwu nke ndị Juu, ọ bụghị iji obi ha dum na-apụ n'abalị. Nke a bụ ohere ha ịbọ ọbọ site n'ịkpa onye a na-akpọ eze ndị Juu ahụhụ. N'elu ya ka a na-awụkwasị obi ọjọọ nile ha chere banyere ndị a na-adịghị ike. Otu n'ime ha gbara ọsọ ma kụọ alaka site n'osisi ogwu, na-eme ka ọ bụrụ okpueze ka ọ na-adị n'elu nku Kraịst. Mmetụta nke okpueze a nke ogwu mebiri ọbara ahụ. Ndị ọzọ bịara na-eyi akwa uwe nke onye na-elekọta ndị agha na-eke ya gburugburu ya. Ọbara ahụ ejikọtara ya na ákwà na-acha odo odo ruo mgbe Jizọs yiri ka ekpuchi ya. Tụkwasị na nke a, a kụrụ ya ụkwụ ma jiri obi ọjọọ tụọ ya aka. Ụfọdụ na-ehulata n'ihu ya, dị ka à ga-asị na ha kwadebere ya maka mgbakọ. O yikarịrị ka ndị agha ndị agha a hà nọchiri anya mba dị iche iche nke Europe, na-egosi na ọtụtụ n'ime ebo ndị ọzọ na-ekere òkè n'ịkwa emo na nkwulu a na-eduzi Nwa Atụrụ Chineke.
4 Ya mere Pailat puta ọzọ, si ha, Le, anameme ka ọ puta n'ebe unu nọ, ka unu we mara na ahutaghm ihe kwesiri ntukwasi-obi megide ya. 5 Ya mere Jisus puta, nēkpu okpu-eze nke ogwu, uwe akwa. Pailat si ha, Le, Nwoke ahu.
Pailat lere anya na ọ bụ onye aka ya dị ọcha. Na nke ugboro atọ ọ gakwuru ndị ndú ndị Juu ma hụ ọzọ, sị, "Ahụghị m ihe ọjọọ ọ bụla." N'ikpeazụ, ọ gbalịrị ime ka ha gbakọta ihu ihu na ihu iji kpuchie aghụghọ ma gosipụta eziokwu ahụ.O weputa Jisos na ihe omuma ihe nile na anya mmiri na ya na obara nke na adakwasi ya na okpueze ogwu n'elu ya. N'elu-ya ka ákwà-nb͕okwasi-nb͕okwasi-nb͕okwasi di;
Ị nwere ike ịtụta onyinyo Nwa Atụrụ Chineke na-ebu mmehie ụwa? Mmetụta ya dị elu, n'ihi na ịhụnanya ya na-enweghị atụ gosipụtara n'ịtachi obi ya. O guzo n'ihu ndị na-anọchi anya East na West, na-akwa ya emo, na-atagbu ya na okpueze. Okpueze niile nke ụwa na nkume bara nnukwu uru ha abaghị uru ma e jiri ya tụnyere okpueze ogwu ya nke nwere ọbara nke na-egbu maka mmehie niile.
d) Pailat nwere obi ụtọ site n'àgwà Chineke nke Chineke (Jọn 19:6-12)
6 Ya mere mb͕e ndi-isi-nchu-àjà na ndi-isi huru Ya, ha tiri nkpu, si, Kpọgide Ya n'obe. Kpọgide ya n'osisi. "Paịlet wee sị ha:" Kpọrọ ya n'onwe unu, kpọgidekwa ya n'osisi, n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla m hụrụ n'aka ya." 7 Ndị Juu zara ya, sị:" Anyị nwere iwu, ọ bụkwa n'iwu anyị ka o kwesịrị ịnwụ, n'ihi na o mere onwe ya Ọkpara Chineke."
Ogologo oge nke ahụhụ ahụ, ọtụtụ n'ime ìgwè mmadụ ahụ gbasakwara ọnụ ụzọ ámá gọvanọ. Ndị ndú ndị Juu adịghị njikere ime ka àgwà ha ma ọ bụ gbanwee obi ha, ma ha kwetara ịjụ ọnwụ Jizọs ozugbo na mkpu na ọgba aghara. Ndi choro idiri idiri ka enwere obi nkorop ma chee na Chineke arap tara Jizos. O nyeghị ha ọrụ ebube nke nnapụta, n'ihi ya, ihe ndị a chọrọ ka e gbuo ya na-ebuwanye ibu, a na-atụkwa Paịlet ka ọ gafee ikpe kasị mma. N'ihi ya, ha jụrụ ya ma nyefee ya n'ọchịchị nke ihere.
N'oge ahụ, Paịlet na-eleghara ihe ọ bụla anya nke mgbagwoju anya, ma ọ chọghị igbu mmadụ n'ụzọ iwu kwadoro, ya mere ọ gwara ndị Juu, sị, "Kpọrọ ya ma kpọgide ya n'obe, ọ bụ ezie na enwere m obi ike na ọ dịghị ọcha" - oge nke atọ nke nkwenye ya na Jizọs bụ onye ikpe na-amaghị. Na nke a, Paịlet kpebiri na ya onwe ya ga-ama ikpe mara na ọ nweghị ikike ịpịa ndị aka ha dị ọcha.
Ndị Juu maara na iwu Rom machibidoro igbu mmadụ ọ bụla, Paịlet wee gbanwee ha ma ọ bụrụ na ha eme otú ahụ, n'agbanyeghị okwu mmesi obi ike ya. Iwu ndị Juu enweghị ndokwa maka ikpogide obe, kama ọ bụ maka ịtụ nkume. Jizos "kwuluworo" ma kwesiri ito nkume.
Ndị okenye ndị Juu maara na ọ bụrụ na azọrọ na Ọkpara Chineke bụ nke ziri ezi, ha kwesịrị ikpere n'ala. Ikpogide n'obe ga-egosiputa na ya abugh Chineke n'emekpa ahu nile nke o tara. Ya mere ha gabu ndi ezi omume site n'onwu ya, obughi site na aja ogbugba aja, kama site na nelu obe g'eme ka amara na Chineke.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs, anyị na-ekele gị maka ihe mgbu gị na mmekpa ahụ gị, ị mịara ọnyá anyị. Anyị na-eto gị maka ndidi, ịhụnanya na ịma mma gị. Ị bụ Eze anyị. Nyere anyi aka irubere gi isi; K'anyị na-agọzi ndị iro anyị, Na-emere ndị kpọrọ asị ebere. Anyị na-eto gị na ọbara gị na-asacha ikpe ọmụma anyị. Nwa nke Chineke, anyi bu nke gi. Mee ayi ka anyi di nso, ka anyi jee ije n'ime obi ebere, na-ekele maka ugha unu.
Gịnị ka anyị na-amụta site na foto Jizọs nke a kụrụ, nke na-acha odo odo na okpueze ogwu?